ဘဲလ်လေယာဉ်ကော်ပိုရေးရှင်း - Rikoooo
ခေါင်းလောင်း 429 GlobalRanger Multi Pack ကို FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 138 ကို MB
2004 မျိုးကွဲများနှင့် 429 repaints အတူဘဲလ် 32 GlobalRanger များအတွက် FS35.Superb အထုပ်အဘို့သာ။ တစ်ဦးကို virtual cockpit နဲ့ထုံးစံ gauge နဲ့အသံနှင့်အတူတစ် 2D panel က, autopilot နှင့် more.This pack ကိုပု4extension များပါဝင်သည်ပါဝင်သည်: ဘဲလ် 429 မြို့ပြတိုးချဲ့မှု Pack ကို, ဘဲလ် 429 HEMS တိုးချဲ့မှု Pack ကို, ဘဲလ် 429, La ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ ဆာဂျီယို Kauffman
AH-1W စူပါ Cobra AlphaSim FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:7083
Size: 6.3 ကို MB
အတွက် FSX hereWonderful add-on ဟောင်း payware သဟဇာတမူကွဲကိုကလစ်နှိပ်ပါယခုသင် love.AlphaSim AH-1W FS20041 များအတွက် Features လိမ့်မည်ဟု freeware ။ အလွန့်အလွန်မြင့်မားသောအရည်အသွေးမော်ဒယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ကို virtual cockpit2 ။ အပြည့်အဝ FS2004 မော်ဒယ်အားလုံး FS2004 features.3 နှင့်အတူပါဝင်သည်။ anima နှင့်အတူမြင့်မားသည့်စစ်မှန်သောကို virtual cockpit ... ဆက်ဖတ်ရန်
ဘဲလ် HC412 Agusta / Griffin AB412 Hovercontrol FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Size: 15.2 ကို MB
ဤတွင်နှစ်ဦးထိပျတနျးဗားရှင်းနေသောခေါင်းစဉ်: 412 နှင့်အတူ Agusta ဘဲလ် 412 နှင့်ဘဲလ် 12 Griffin repaints: ဘူဒါဘီရဲတပ်ဖွဲ့, Carabinieri (5Type), နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (3Type) Guardia Costiera, Guardia di Finanza အီတလီနိုင်ငံတပ်မတော် (2type), ဂျပန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့က Air နယ်သာလန် အင်အားစု, ဆွီဒင်လေတပ်, အမေရိကန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့, Del Fuoco Vig ... ဆက်ဖတ်ရန်
ဘဲလ် 205 Hu-A1 Iroquois FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 13 436
Size: 10.3 ကို MB
တဆယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူကြွလာ။ "Huey" ချစ်စနိုး handle.The ဘဲလ် uh-1 Iroquois ရန်လွယ်ကူလေယာဉ်မော်ဒယ်နဲ့အရည်အသွေးအပုံတူသည်, ရှေ့ပြေးပုံစံ 22 အောက်တိုဘာလ 1956 အပေါ်သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို လုပ်. , တစ်ဦးအမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော် 16 000 မိတ္တူနှင့်စစ်ရေးထုတ်လုပ်တင်ပို့ 70 နိုင်ငံပေါင်းကျော်နှင့်ရှိပါတယ်ခဲ့ကြ ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ မူရင်းမော်ဒယ်: Dean Baunton, texture & Model ကိုမို
Supercopter AIRWOLF (တီဗီ) ဘဲလ် 222 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 13 430
Size: 5.1 ကို MB
ဟူ. အမည်ပေးထားပြီး AIRWOLF: ဒီနာမည်ကြီးတီဗီစီးရီးကနေစူပါ-copter ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီးထူးခြားတဲ့ livery အတူ။ အသံတီဗီ series.Airwolf သူတို့ကြောင့်ရယ်စရာ 80 မိနစ် Donald P. Bellisario အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနဲ့ဇန်နဝါရီလ 50 22 နှင့် M အကြားထုတ်လွှင်၏ 1984 ဖြစ်စဉ်များတစ်ဦးအမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးဖြစ်ပါတယ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ FS9 လေယာဉ်ဘဲလ် dans မြင်နိုင်
ဘဲလ်ရဟတ်ယာဉ် 430 FS2004 HOT ဒေါင်းလုပ်
Downloads: 14 569
Size: 26.2 ကို MB
Gmax အောက်မှာလုပ်အရည်အသွေးမြင့်၏ nice ရဟတ်ယာဉ်! 14 repaints (နှင့်4မော်ဒယ်များ), ထုံးစံအသံများနှင့်ကို virtual cockpit အတူ။ ဒီ add-on ထိုကဲ့သို့သောအလင်းအိမ်နဲ့ animations တွေကိုအဖြစ်အားလုံးမူရင်း FS2004 features တွေရှိပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ အလန် Devins နဲ့ Keith Devins အားဖြင့်ပယ် Finished Rory ကယ်လီက
ဘဲလ်ရဟတ်ယာဉ် 47 FS2004 ဒေါင်းလုပ်
Downloads:9055
Size: 22.1 ကို MB
ရဟတ်ယာဉ် 11 repaints နှင့်အတူကြွလာ။ အာရုံစူးစိုက်မှု, စီမံကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲ! 1943 ခုနှစ်တွင်အာသာ Young က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသန, စံပြ 30 နေတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ဘဲလ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆဲအလားအလာဒါပေမဲ့တောဒီမော်ဒယ်နှစ်ခုမိတ္တူထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဘဲလ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကြဉ်ရှောင်လော့။ အဆိုပါဘဲလ် ... ဆက်ဖတ်ရန်
စာရေးသူ Jean-Marie MERMAZ